ပေကျင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၂၂ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရန် ၁၀ ရက်ခန့်သာလိုပါတော့သည်။ ယခု သီချင်းဗီဒီယိုမှာ “ဆောင်းရာသီမှာ အတူဆုံစည်းကြစို့” ဟုအမည်ရပြီး အိုလံပစ်အားကစားပွဲကို ဂုဏ်ပြုကာ တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (Xinhua) ………………………………. (English Version) Beijing2022 Olympic MV |...
ကွာလာလမ်ပူ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခါသမယအားကြိုဆိုသည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် အဏ္ဏဝါပြတိုက်တွင် ရေအောက် ခြင်္သေ့အက ဖြင့် ရေငုပ်သမားများက ကပြဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။ရေငုပ်သမားများသည် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်နဲ့ ကံတရားစောင့်နတ် ကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်ကာ နှစ်သစ်ကူး တီးလုံးစည်းချက်များနှင့်အညီကပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Aquaria KLCC ၌ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နောက်ထပ် ပြပွဲ ၄ခု ကို...
ဂျေရုဆလင်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတို့သည် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံအကြား မိုင်ပေါင်းထောင်ချီကွာဝေးသော်လည်း ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကတည်းက သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်စဉ်ကာလ မှစတင်ကာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကြီးမားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ (Xinhua) ………………… (English Version)...
ဖနွမ်းပင် ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ) ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်အား တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့သည် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာ...
Page4of 6955‹ Previous12345678Next ›Last »